Patrick Byrne - Akwụkwọ Akwụkwọ Agba Oyi Na-enwe Mmekọahụ na Transgender | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Patrick Byrne - Akwụkwọ Little Gray Na Mmekọahụ na Transgender
Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịgbanwe mmekọahụ ha, ha nwere ike ịgbanwe afọ ndụ ha ma ọ bụ agbụrụ ha?
Akwụkwọ nta a na-akpọ Grey na Mmekọahụ na transgender na-agbagha echiche a (echiche “nkwenye” na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị) nke transgenderism. Ego ụwa transgender na-ekwu na iwu kwesịrị ịnabata "mmata nwoke" nke mmadụ na-abụghị, ma ọ bụ n'ọnọdụ nke mmekọahụ mmekọahụ ahọpụtara.
Transgenderism nwere ọtụtụ conundrums.
Anyị niile nọ na ụdị dị n'etiti nwoke na 100 pasent nwoke na 100 pasent nwanyị, ka ọ bụ na anyị niile bụ ụmụ nwoke ka ọ bụ nwanyị?
Girls umu agburu umu nwoke n’agha ka a ga-anara anakwere umu nwoke nke ndu ha bu ndi amara dika ndi nwanyi n’enweghi nchebe n’ebe ulo akwukwo? Shouldkwesịrị ka amata ụmụ nwoke abụọ sitere na ụmụ nwanyị dị ka ụmụ nwanyị dịka ndị nwanyị nwere mmasị nwanyị?
Ndị na-eme ndọrọndọrọ chọrọ asụsụ na-anọpụ iche, egwuregwu, ụlọ mposi, ụlọ mgbanwe, wdg. Nke a na-emeso ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị otu, otu, akwa otu ndo. Nke a ọ́ bụghị ọdịiche nke 'ọdịiche'?
Gini mere iwu nke "njirimara nwoke na nwoke" ji kwenye onye ọ bụla - n'ihe iyi egwu nke iwu, ọkachamara, ọrụ na mmanye nke ọdịbendị - inye ụmụ nwoke na-amụ banyere ụmụ nwanyị ihe dị ka ụmụ nwanyị nwere ikike ha niile?
Iwu transgender na-eme ka amata nwoke na nwanyi bụrụ “nkwenye siri ike steeti”, dịka okpukpe guzobere steeti, na -emepụta esemokwu miri emi na imirikiti ndị mmadụ na-ejide ụwa na-ahụ maka mmekọahụ ha.
Patrick Byrne na-ajụ ajụjụ banyere nyocha banyere nsonaazụ nke iwu njirimara nwoke na nwanyị na ndị ọchịchị onye kwuo uche ya.
E si Amazon ebe a.